Ukusebenzisana kwamashishini kusetyenziswa i-TWIKI
NgoLwesibini, Julayi 17, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ukubaluleka kokuhamba komsebenzi ngokugudileyo kunye nokunxibelelana ngokuvulekileyo akunakuze kujongelwe phantsi, ngakumbi kwihlabathi lanamhlanje lokhuphiswano apho isantya, ukuthembeka kunye nobungcali zizinto zokuphumelela. Nangona kunjalo imibutho emininzi isebenza "kwinkcubeko yesilo" engakhuthazi ukwabelana ngolwazi kwindima, kwimisebenzi, okanye kumasebe.
Izixhobo ezinje ngeTwiki zinceda amashishini ukuba aphume kwezo nkcubeko zingasebenzisaniyo.
I-TWiki® iguquguqukayo, inamandla, kwaye kulula ukuyisebenzisa kwi-wiki yeshishini, iqonga lokusebenzisana kweshishini, kunye neqonga lesicelo sewebhu. I-Wiki eyakhiwe, esetyenziselwa ukuqhuba indawo yophuhliso lweprojekthi, inkqubo yolawulo lwamaxwebhu, isiseko solwazi, okanye nasiphi na esinye isixhobo seqela, kwi-intranet, extranet okanye kwi-Intanethi.
I-TWiki ngokuyintloko i-wiki eyakhiwe, esebenza njengenqanaba leshishini le-Wikipedia okanye uthungelwano lweendaba zentlalo ngaphakathi, kuxhomekeke kwindlela ishishini elikhetha ukuyisebenzisa ngayo. Abaphathi banokusebenzisa esi sixhobo ukuseta iiprojekthi, ukulawula amaxwebhu, ukuseta i-intranet, okanye usetyenziso lwewebhu. I-Twiki ikwavumela iinketho eziphambili ezinje ngokudlula okanye ukufakwa koxwebhu okanye inxenye yoxwebhu kwelinye uxwebhu ngereferensi, ukufumana iitshathi kunye nezinye izinto ezinokwenzeka.
Ukuhambisa iTwiki njengeqonga lentsebenziswano kuqinisekisa ukuba ulwazi luyafumaneka kwabo balifunayo. Abathengisi banokufikelela kwiTwiki kwaye bafumane ulwazi olufunekayo ngokukhawuleza, okanye banxibelelane nomntu ogunyazisiweyo ngexesha lokwenyani, banciphise ixesha lokuhamba lobomi. Ukuhambisa iinkqubo zangaphakathi ngeTwiki kwenza ukuhamba kwedatha kunye nolwazi kungagungqi kwaye kungabinamthungo, kunegalelo kukonyuka kwemveliso kunye nokunciphisa amaxesha akhokelayo.
UTwiki ngu iqonga lomthombo ovulekileyo kwaye banesisombululo esisindisiweyo. Kulabo bafuna uncedo lobuchwephesha, iTwiki ibonelela nge iinkonzo zabacebisi Ngubani oza kuqwalasela, agcine kwaye enze ngokwezifiso i-Twiki.
tags: Intsebenziswanoukusebenzisana kwamashishiniintsebenziswano yeqelatwikiwiki